၉။ လည်လည်သွားမယ်ဆိုရင် ………………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ၉။ လည်လည်သွားမယ်ဆိုရင် ……………….	7
၉။ လည်လည်သွားမယ်ဆိုရင် ……………….
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 28, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.. |7comments
” ခြေတစ်လှမ်း အကွာက သူတို့နေရာ”(အပိုင်း ၉)
နောက်ဒီမြို့လေးက စီးပွားရေးကုန်စည်ဖလှယ်ရာမြို့ဆိုတော့ အားလုံးကအလုပ်ဘဲ
မြို့အ၀င်စ နန်းတော်ပေါက်မှာတော့ အခွန်လွတ် ဈေးဆိုင်ကြီးတွေရှိမယ်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား (ပြည်မက တရုပ်တွေဘဲလာကြတာများပါတယ်)
အဲ့နားလေးမှာကျယ်ခေါင်မြို့ရဲ့အထင်က ရလို့ပြောနိုင်တဲ့ ဘုလုံးကြီးကိုထိပ်မှာတင်ပြီး
နောက်မှသိရတာက အဲဒီစာလုံးကပ်ထားတဲ့နေရာက ၅ပေကျယ်ပြီး၈ပေအမြင့်ရှိတဲ့သံပုံးကြီး
(Ran Lu) လူသွားလမ်းမကြီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။
အဲဒီလမ်းမကြီး ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ ဘဏ်တွေလျှပ်စစ်ပစ္စည်းလက်ကားအရောင်းဆိုင်တွေ
အဲလမ်းမပေါ်မှဘဲ နာမယ်ကျော် မနောကွင်းဆိုတာရှိပါတယ်။
ဒီမနောကွင်းလေးကတော့ ကျယ်ခေါင်မြို့နေသူများရဲ့ ညအခါလည်ပတ်စရာ
2 ညနေခင်းမနောကွင်းမှာ ကျန်းမာရေး
ကျနော်၂၀၁၂ မှာတစ်ခေါက်ရောက်တုံးက မနောကွင်းက ဒီလောက်မစည်ကားသေးပါဘူး။
မနောကွင်းကို အချိန်ဖြုန်းစရာနေရာလိုသတ်မှတ်ပြီး အပျင်းပြေ လမ်းလျှောက်လို့လာသူတွေ
နောက်ညပိုင်းမှာစည်တဲ့တစ်နေရာကတော့ ၄ လမ်းက ညဈေးတန်းပါဘဲ။
လူအတော်များများက ညပိုင်းဆိုရင် ညဈေးတန်းကိုလျောက်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလိုသွားလာနေကြတာမြင်တော့ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က မန်းလေးမှာ
ညည ဆိုရင် ညဈေးတန်းလျှောက်ခဲ့ကြတာကိုသွားမြင်မိပါတယ်။
စုံတွဲအတော်များများက တော့ တံတားပေါ်မှာ စကားပြောကြ
မနောကွင်းေ၇ွှလီ မြစ်နံဘေး
ရွှေလီမြို့ထဲကိုဝင်လာရင် မနောကွင်းလို့ ခေါ်တဲ့ပန်းခြံရှိပါတယ်။
အဲဒီအနားလေးမှာ ရေကန်ရယ်ကုန်းကျော်တံတားလေးရယ် ဘုရားကျောင်းလေးရယ်ရှိပါတယ်။
ရွှေလီမြစ်ထဲကို ရေဆင်းကူးကြတဲ့ နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်ဆေးခြယ်လို့ရတဲ့ အရုပ်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းလှပါတယ်။
လည်စရာသိပ်မရှိရင်စားစရာကော ဘာရှိလဲလို့ မေးများမေးခဲ့ရင်
တောင်ပေါ်သား says: ရောက်ဖူးအောင်သွားချင်ပေမယ့် စရိတ်က မနည်းလောက်ဘူးနော့ ၊
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: သိပ်မကုန်ဘူးဗျ
ရန်ကုန်မူဆယ် ကားခ တစ်သောင်းခွဲ
ကျယ်ခေါင်ထဲမှာ တည်းခိုခန်းခက နှစ်ယောက်ခန်း တစ်ရက်ယွမ်တစ်ရာ တန်ဆို ကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်
အောင် မိုးသူ says: ကျယ်ခေါင်က တရုတ်ပြည်ဘက်ခြမ်းပေါ့နော် ဟုတ်လား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ပါတယ် မူဆယ်နဲ့ကျယ်ခေါင် ကျောက်လမ်းမလေးတစ်ခုဘဲခြားပါတယ်
မြစပဲရိုး says: ဆိုင်လေးတွေ နဲ့ လမ်းတွေ က သပ်သပ်ရပ်ရပ်နော်။ ကောင်းလိုက်တာ။
. ရွှေပြည်ထဲ မှာလဲ အရင်က လေဟာပြင်ဈေးလို ရှိခဲ့တာ။
အခုတော့ မြေလွတ် ရင် ကို အလွတ်မပေး ဘဲ ကိုယ်ပိုင် လုပ်နေကြတော့ မြို့ထဲ လမ်းဘေး ဈေးသည် တွေ လမ်းမတော် က စ တာ ပန်းဆိုးတန်း ထိ မဆုံးသေး။
လမ်းလျှောက်ဖို့ နေရာ ကို မရှိတော့။
Courage says: အပြင်မှာ ရောက်ဖြစ်မရောက်ဖြစ် မသေချာတဲ့နေရာလေးကို စာထဲကနေ လည်လည်ခေါ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျနော်လဲ မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေကို အခုလိုခေါ်သွားတဲ့လူရှိတော့ စာထဲကနေရောက်ဘူး သွားသပေါ့